HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 31-AUG-2020
Monday August 31, 2020 - 10:13:36 in Wararka by Mogadishu Times
Dowladda Soomaaliya oo gudbisay Ashta ko ka dhan ah Xafiiska UNSOM DF/Soomaaliya ayaa sheegtay in la gaaray waqtigii dib u qiimeyn lagu sameyn lahaa waaji baadka xafiiska Q/Midoobay ee Soomaaliya, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu yar yahay awoo
Dowladda Soomaaliya oo gudbisay Ashta ko ka dhan ah Xafiiska UNSOM DF/Soomaaliya ayaa sheegtay in la gaaray waqtigii dib u qiimeyn lagu sameyn lahaa waaji baadka xafiiska Q/Midoobay ee Soomaaliya, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu yar yahay awooda uu ku bixiyo taageerada siyaasadeed iyo caawinaada farsamo ee ku saabsan ajanda ha dowlad dhis ida Somaliya. Qoraal kasoo baxay danjira ha Soomaaliya u fadhiya Q/Midoobay oo la gu dbiy ay madaxweynaha golaha Q/Midoobay, ayaa lagu sheegay in xafiiska UNSOM uu ho os u dhigo tallaabooyinka horumarka ee ay sa meyso DFS,iyadoo taas bedelkeedna uu xafiis ka warbixinadiisa 3 billoodlaha ah ku sheego ka felcelinta dhacdooyinka. "In kasta oo ay jiraan horumar ay DFS ku tal aabsatay sannadihii ugu dambeeyay, UNSOM waxay umuuqataa inaysan faafinayn dadaalka iyo himilooyinka la xaqiijiyey ee ay DFS ka wa day dhulka. Tani waxay sababtay in howlaha ergada ay noqdaan kuwa falcelin ka sameeya dhacdooyinka, iyadoo ay yartahay awooda ay ku bixiso taageero siyaasadeed iyo caawinaad farsamo oo ku saabsan natiijooyinka muhiimka ah ee aasaaska u ah ajandaha dowlad dhisida Soomaaliya," ayuu yidhi danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qora alkeeda ku sheegtay inay ku baaqayso in la ila aliyo madaxbanaanideeda lagana digtoonaa do in la soo faro galiyo arrimaha Soomaaliya -gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. "Hadda in ka badan sidii hore, iyada oo dan eeyayaasha siyaasadeed ee muhiimka ka ah Somaliya ay ku heshiiyeen qaabka doorasha da, waxaan ka codsaneynaa Golaha Amniga iyo saaxiibada caalamiga ah inay naga taagee raan dadaalkeena si aan u fulinno dadaallada aan dalkeena ku kacno," ayaa lagu yidhi qora alka. Dhawaan ayay ahayd markii wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya, James Swan uu golaha ammaanka u gudbiyay warbixin 3 bill oodle ah oo uu ku saabsanayd dhacdooyinkii dhacay saddexdii bil ugu dambeysay.
Sii hayaha RW Dalka oo guddoomiyay Shir looga hadlay dhaqaalaha iyo deyn cafinta
Sii hayaha R/Wasaaraha dalka, Md.Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa Shalay guddoomiy ay shir looga hadlay dhaqaalaha dalka iyo dar dar gelinta qorshaha deyn cafitna dalka.
Kulanka oo ay ka qeyb galeen sii hayaha wasiirka maaliyadda, gu ddoomiyaha bangiga dhexe iyo mas’uuliyiinta hey’adaha iyo was aaradaha qeybta ka ah tubta horumarinta dhaq aalaha ayaa looga dooday arrimaha dhaqaala ha dalka, gaar ahaan dhibaatadii ka dhalatay xanuunka COVID19.
Sidoo kale kulanka ayaa looga dooday isu di yaarinta shir dhex maraya DFS iyo IMF oo ka mid ah imtixaanaadkii joogtada ahaa ee lagu ogaanayay sida dowladdu ay usoo buuxisay shuruudihii deyn cafinta.
Dhammaan Wasaaradaha iyo hey’adaha do wladda ee ka tirsan tubta horumarinta dhaqaal aha ayaa la faray inay qeybta uga aaddan ka qaataan qorshaha deyn cafinta dalka si loogu guuleysto dhammaan shuruudaha loona gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed.
Wajiga 2aad tira koobka Shaqaalaha rayid ka oo la soo gaba gabeeyay
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS,Md.Sadiq Xirsi Warfa ayaa xarunta Guddi ga Shaqaalaha Rayidka Dowladda ku soo xir ay wajiga 2aad ee tirakoobka madax ka tiriska Shaqaalaha Rayidka Dowladda.
Tirakoobka waxaa la marsiiyay howlwadee nnada Hay’adaha Dowladda iyo shaqaalaha aan la marsiin wajiga 1aad ee tirakoobka Shaqaalaha Rayidka. "Muddo7aad ah oo tirakoobka uu socday, wax aa maray dhammaan shaqaalaha fasaxa iyo cududaaradda ku maqnaa iyo hay’adaha aan la tirakoobin shaqaalahooda, tanina waxay ka dhigan tahay in la dhammaystiray tirakoobka shaqaalaha.” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddi ga Shaqaalaha Rayidka Dowladda, Md. Xasan Abshirow Maxamed.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada , Sadiq Xirsi Warfa ayaa ku sheegay ujeeddada laga leeyahay tirakoobka Shaqaalaha Dowlad da,kor u qaadidda tayada shaqaalaha iyo dhis maha kayd dhexe si loo gaaro daahfurnaan.
"Tirakoobka shaqaalaha oo aan dadaal gali nay waxaan ku doonaynaa inuu door ka qaato horumarinta Shaqaalaha oo muhiim u ah gaari sta yoolalka dib u dhis ee dalka.” ayuu yiri isa goo inta ku daray " Waxaan diiradda saaray naa sidii daahfurnaan lagu gaari lahaa oo ay fursadaha shaqooyinka u noqdaan kuwo si siman looga faa’iideysto.”
Wasiir Saadiq Warfa, ayaa u mahadceliyay guddiga Shaqaalaha Rayidka iyo W/Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo si wadajir ah uga shaqeeyay dhammaystirka tirakoobka Shaqaal aha Dowladda.
Dowladda oo sheegtay inay ka hor tag tay weerar ay qorsheynayeen Al-Shabaab
War kasoo baxay Taliska Ciidanka xoogga dalka qeybta 43ad ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidanka ay 4 ka tirsanaa Al-Shabaab ku dil een nawaaxiga Baar-sanguuni oo ku dhow M/Kismaayo, halka 3kalena ay ku dhaawa ceen.
Tallaabadaan ayaa timid, ka dib markii ay ka war heleen duullaan gaadmo ah oo ay qorshe ynayeen inay la beegsa daan fariisimada Ciidan ka xoogga Dal ka Soom aaliyeed ee degaanka as. Shirwac Cumar Baaruush oo ka tirsan Saraakiisha qeybta 43-aad ee Ciidanka xoog ga Dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dow ladda u sheegay ay Shabaab gaarsiiyeen jab xooggan kana furteen Saanad Ciidan sida uu hadalka u dhigay.
Marka laga soo tago warkaan kasoo baxay Taliska Ciidanka xoogga dalka qeybta 43aad ayaa waxaa jiray dagaal kooban oo degaanka Baar-Sanguuni ee G/Jubbada Hoose ku dhex-maray Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab.
Maxkamadda G/ Banaadir oo Shalay xukuno ridday
Maxkamadda G/Banaadir ayaa xukun ku ri day ganacsade la sheegay in lagu helay inuu sameystay shirkad u shaqeyneysay sida Bank iyada oo kale, balse aanan shati ka heysan Bankiga dhaxe ee dalka.
Ninka Ganacsada ah oo lagu Magacaabo Cabdullaahi Axmed Maxamed (Xaaji Gaabo ow) ayaa Xafiiska Xeer ilaa linta Qaranka uu ku soo ee deeyay in uu u shaqeynay ay sida Ban kiyada, iyada oo uusan ka diiwaangelin shirkad iisa dowladda Soomaaliya.
Garsooraha Maxkamadda Gobolka Banaa dir Dr Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ku dha waaqay Xukunka ayaa sheegay in Cabdullaahi Axmed Maxamed ( Xaaji Gaaboow) lagu xuku may 3 sano oo xabsi ah iyo Ganaax lacageed oo dhan 920,000 oo Dollar.
Sidoo kale Maxkamadda G/Banaadir ayaa xurriyadiisa dib ugu celisay Ayuub Sheekh Ma xamed Amiin, kaas oo ku eedeysnaa inuu la haa shirkad daabacday warqadda qaan shee gadka oo ay isticmaalayeen Shaqaalaha Wasa aradda Caafimaadka ee dhawaan la xukumay, ka dib markii Maxkamaddu sheegtay in damb igii lagu soo oogay lagu waayay.
Garooraha Maxkamadda G/Banaadir Dr Cab diraxmaan Saciid Axmed ayaa sheegay in 2da xukun ee Shalay maxkamaddu xukun ka ku ri dday ay muddo 30 cisho ah heystaan 2a dhin ac ee dacwaddu u dhaxeyso inay racfaan ka qaataan.
Booliska Jowhar oo soo qabtay Aabe Wiilkiisa Dilay
Ciidamada Booliska M/Jowhar ee Maamul ka Hirshabelle , ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen Aabbe ku eedeysan inuu dilay wiil uu dhalay kaasi oo sida la sheegay uu ku tuuray Wabiga, kadibna uu dhintay.
Maxamed Dhaayow Aad an ayaa la sheegay Habeen hore fii dkii wiil uu dhalay inuu wabi ga ku tuuray, balse waxaa Shalay isagana gacanta ku soo dhigay Ciida mada Booliska Hirshabelle.
Wiilka la dilay Allaha u naxariistee ayaa wa xaa lagu magacaabi jiray Marxuum Xasan Max amed Dhaayow, illaa haddana lama oga sabab ta ka dambeysa dilkiisa. Afhayeenka Booliska Soomaliya Sadiiq Doodishe ayaa sheegay eedeysanaha falka gaystay inuu wajihi doono cadaaladda, maadaama wiil uu dhalay gacantii sa uu ku dilay.
Dadka ku nool M/Jowhar ayaa si wayn u ha dal haayo sheekada ku saabsan aabbahan dil ay wiilkiisa, taasi oo ay la yaaban yihiin illaa hadda.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo kulan yeelanaya
Xildhibaanada G/Sh/Baarlamaanka FS ay Maanta waxaa ay leeyihiin kulan, waxaana la filayaa in uu kulan kaasi uu furmo.
Waxaa ay ku kulmi doonaan xarunta kmg ee ay ku shiraan Xildhibaanada G/shacabka ee Villa Hargeysa.
Ajendaha kulan ayaa looga hadli doonaa 2 ajende Akhrinta 1aad Hindise Sharciyeedka ad eegyada Baaritaanka Beeraha Soomaaliyeed iyo Akhrinta 2aad ee Sharciga Hay’ada Socd aalka iyo Jinsiyadaha.Waxaana Xilshibaanada lagu wargaliyay inay soo xaadinaan kulankaas
Madaxwayne Saciid Dani oo Magacaa bay Xubno Ka mid noqonaya Maxkam adda ciidamada ee Puntland.
Madaxweynaha D/G/Puntland Md.Siciid C/hi Dani ayaa magacaabay xubno ka tirsan Maxkamadda Sare ee Ciidamada qalabka sida iyo Danbiyada Culus.
Xubnaha Garsoorka ee la magacabaay wax ay kala yihiin.
G/le Cabdiraxmaan Ciise Xuseen ayaa loo magacaabay Gud.Maxkamadda Ciidamada qal abka sida iyo danbiyada culus ee G/Nugaal &Sool.
Dhamme Siciid Xirsi Ibraahim ayaa loo magacaabay Xeer–ilaa liyaha Maxkamadda CQS iyo Danbiyada Cul us ee G/ Nugaal & Sool.
G/dhexe Cabdirisaaq Jaamac Cabdulle ayaa loo magacaabay Garsooraha Maxkamadda CQS iyo danbiyada culus ee G/Nugaal &Sool.
G/le Axmed Jaamac Maxamed ayaa loo mag acaabay Garsooraha Maxkamadda CQS & da nbiyada culus ee G/ Nugaal& Sool.
G/le Siciid Aadan Siciid ayaa loo magacaab ay garsooraha Maxkamadda CQS& danbiyada culus ee G/Nugaal &Sool
G/sare C/hi Cabdi Shire ayaa loo magacaa bay Gud.Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee Gobolada Mudug
Dhamme Cawil Warsame Maxamed ayaa loo magacaabay Xeer–ilaaliyaha Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee G/ Mudug
Dhamme Cabdiweli Maxamuud Maxamed ay aa loo magacaabay Garsooraha Maxkamad da CQS & Danbiyada Culus ee G/Mudug
G/le Cabdi Faarax Cali ayaa loo magacaab ay Garsooraha Maxkamadda CQS& Danbiya da Culus ee Gobolada Mudug
G/le Ibraahim Bile Maxamed ayaa loo magic aabay Gud.Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee G/ Bari, & Sanaag,
11.Dhamme Maxamed Xuseen Axmed ayaa loo magacaabay Xeer–ilaaliyaha Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee G/Bari, & Sanaag, Dhamme Cali Ibraahim Cismaan ayaa loo magicaabay Garooraha Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee G/ Bari, iyo Sanaag,
G/dhexe Maxamed Cabdi Nuur ayaa loo mag acaabay Garsooraha Maxkamadda CQS & Danbiyada Culus ee G/Bari& Sanaag,
14.G/le Sahal Cabdi Cartan ayaa loo magacaa bay Garsooraha Maxkamadda CQS & Danbiya da Culus ee Gobolada Bari,iyo Sanaag,
Taliska Ciidanka xoogga oo soo saaray Am mar ku socda Madaxa K/Galbeed
Maalmihii la soo dhaafay waxaa kordhay weerarada ay Xubno ka tirsan dagaalamayaa sha Ururka Al-Shabaab ka geystaan degaanna da Maamulka K/Galbeed, waxaana taliska Ciid anka xoogga dalka uu soo saaray qorsho loo ga hortagayo weeraradaas.
Taliyaha qeybta 60aad ee CX DS Jen. Maxamed Sh. C/hi ayaa ku amray dhamaan Ciidamada Dowladda & kuwa K/Galbeed ee ku sugan degaannada Maamulkaas inay dib ugu laabtaan Xeryahooda iyo difaacyadii ay ka Shaqeyn jireen. Waxaa uu ku eedeeyay Mada xda D/G/K/ Galbeed inay ilaalo ka dhigteen Cii damadii loo baahnaa inay sugaan Amniga degaannada Maamulkaas,waxaana uu ku am ray dhammaan Ciidamada inay difaacyadooda dib ugu soo laabtaan.
Waxaa uu sheegay Taliyaha in Madaxda Ma amulka K/Galbeed ee soo wareejin waaya ask arta ilaalada u ah ee loogu talo galay difaacya da inay si ammar la’aan ah uga soo wadan do onaan si Ciidamadaas ay u noqdaan kuwa Shaqadooda qabsada.
Koox Ingiriis ah oo madax furasho siis ay burcad badeed Soomaali oo sii daayay la haystayaal reer Iiraan ah
Koox Ingiriis ah ayaa gacan ka geysatey sii deynta 3 Badmaaxiin reer Iiraan ah oo laga sii daayey burcad badeedda Soomaalida, iyadoo ay jirto xiisad kacsan oo u dhaxeysa Ingiriiska iyo Iiraan oo ku saabsan shaqaale samafal oo u xiran Tehran oo lagu magacaabo Nazanin Zaghari-Ratcliffe.
Heshiiska siideynta badmaaxiinta ayaa ku lug lahaa bixinta lacag madax furasho ah oo gaareysa $ 180,000 - oo ay garwadeen ka ahe yd iskaashatada taakuleynta afduubka
ee fadhigeedu yahay Boqor tooyada Ingiriiska- taas oo uu isku dubbaridey diblomaa si hore oo British ah oo fadhi giisu ahaa Kenya, John Steed.
Tallaabdan ayaa waxay soo afjartay xaalad dii afduub baddeed ee ugu muddada dheerayd ee ilaa hadda gobolka ka jirta, iyadoo 3da nin ay muddo shan sano iyo bar ah afduub ku ha ysteen burcad baddeeda Soomaalida.
In ka badan 2000 badmaaxe ayaa laga afd uubay xeebta Soomaaliya intii u dhaxeysay 2005- 2012, xilligaas oo burcad badeeddu noq otay ganacsi faa'iido badan leh, iyadoo ku dhowaad nus bilyan doolar lagu bixiyay madax furasho. Markii ay shirkaduhu bilaabeen inay ilaalo hubaysan saaraan maraakiibta.
Halka maraakiibta caalamiga ah ay bilaabe en inay roondo ku sameeyaan bada geeska Afrika marar badan, weeraradii way yaraade en, laakiin gebi ahaanba ma dhiman.
"Tani waxay calaamad u tahay dhammaad ka xilligii burcad-badeednimada Soomaalida, iyo xanuunka iyo dhibaatada la-haystayaashii la illaaway ee Soomaaliya," ayuu yiri Steed.
8 badmaaxiin Iiraaniyiin ah ayaa markii ho re lagu qabtay markabkooda Siraj, oo ka kall uumaysanayay biyaha Soomaaliya, bishii Maar so 2015. Shan ayaa la siidaayay 2018. Badm aaxiinta waxay ku andacoonayaan in loola dhaqmay sidii ariga oo kale.
Iskaashiga Taageerada afduubka wuxuu xir iir balaaran la lahaa burcad badeeda Soomaal ida dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Laga soo bilaabo 2013, waxay gacan ka gaysatay gorg ortanka siideynta shaqaalaha 3 markab oo ka le oo la afduubay oo milkiilayaashooda aysan caymis ku jirin.
Sii deynta la heystayaasha reer Iran iyadoo loo marayo jilayaasha Ingiriiska iyo Iiraan ayaa si weyn ugu fududaaneysa xiisadda ka dhalat ay xarigga Zaghari-Ratcliffe.
Madaxweyne Siciid Deni oo ciidamo badan iskaaga soo hormariyey Muqdisho
Madaxweynaha D/G/Puntland, Siciid C/hi Maxamed (Deni) oo saacadaha soo socda ku soo wajahan M/Muqdisho ayaa iskaaga soo hormariyey ciidamo sugayo amnigiisa inta uu joogo gudaha warkii.com.
Warbaahinta Puntland ayaa goor sii horreys ay baahisay sawirrada askar ka tirsan ciidanka madaxtooyada oo aad ugu qalabeysan hubka fudud kuna sii jeeda Muqdi sho. Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo dhankiisa ku soo jeeda Muqdisho ayaa wada-hadallo la leh madaxda dowladda Soom aaliya, iyaga oo ka wada-arrinsanaya xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soo socda ee dhacaya dhammaadka 2020/ illaa 2021-ka.
Sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daraya in wufuud ka kala socota 2da dhinac oo hor dhac u ah 2da Madaxweyne ay soo gaareen magaalada Muqdisho.
Shirka wada-tashiga ee u dhexeeyo dowlad da dhexe, Jubbaland iyo Puntland ayaa ka dha caya xarunta Xalane oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo.
Dhinaca kale xog aan helnay ayaa sheege ysa in 2da madaxweyne ay degi doonaan mad axtooyada iyo agagaarkeeda, Axmed Madoo be ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada, halka Deni uu degi doono guri gaar ah oo u dhow madaxtooyada.
Arrimahaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo xi isada u dhexeysa dhinacyadan ay ka dartay, ka dib shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay ka maqna ayeen maamullada Jubbaland & Puntland.
DFS oo war kasoo saartay cilada qabsatay Diyaarad ka duushay Garoonka Aadan-Cadde
Diyaaraddan oo sidday 207 rakaab ah ayaa ku wajahnayd dhinaca dalka Turkiga waxaana ay la kulantay ciladda dhinaca oxygen-ka ah ka dib markii uu gabaabsi ku noqday xilli ay sii galaysay hawada dhinaca Itoobiya.
Sida ay sheegeen maamulka hay’adda duul ista rayidka Soomaaliya in in diyaaraddu ay si nabad ah ku soo cago dhigatay iyada oo eega yaan injineerada Shirkadda duulimaadka si loo hagaajiyo cilladda.
"Diyaaradda ayaa waxa ay saacadu marka ay aheyd 1:15 ka duushay garoonka Aadan Cade ee M/Muqdisho waxaana markii ay ku dhaweyd hawada dalka itoobiya ku timid cilad hase ahaatee markii dambe waxa ay si nabad ah dib ugu soo laabatay garoonka Aadan Ca dde iyadoo nabad qabta mana jirto halisa hadda.
Ugu dambeyn diyaaradda ayaa loo hagaaj iyay Xiriirka duulimaadka ka dibna ka duushay Garoonka iyadoo kusii jeeda dalka turkiga oo ay hore ugu socotay.
Turkish airline oo bilowday duulimaadyo joogto oo ay ku timaado dalka sanadkii 2012-kii, Turkiga ayaa ah saaxiibka ugu awoodda ba dan oo isticmaalay 1 bilyan oo doolar sanadkii 2011-kii taasi oo isagu jirta gaargaar iyo soo celinta kaabayaasha dalka ee burburay 30-
sano ka hor
Md.Qoorqoor oo kormeeray Xarunta Wasa arada Maaliyadda
Kormeerkan shaqo ee uu Madaxweynuhu
ku tegey W/Maaliyadda, ayaa ujeedadiisu ah eyd u kuurgalidda shaq oo yinka baaxada leh ee ka so cda xaru nta W/Ma aliyadda Galmu dug.
Wasiirka W/Maaliyadda Md.Farxaan Cali Maxamuud ayaa madxweyn aha kusoo dhaweeyey W/Maaliayadda isago na mid mid u soo tusay xafiisya da qeybaha ee wasaaradda
Ka dib kormeerka, madaxweynaha ayaa kul an guud layeeshay wasiirka, agaasinka guud & dhammaan hawl wadeenada wasaaradda waxuuna kula dardaarmay inay dardar geliya an shaqada ay u hayaan shacabkooda, isla markaana ay uga soo baxaan si hagrasho la’ aan ah.
Faah faahin: Labaatan qof oo lagu xiray M/ Kismaayo
Hawlgal laga sameeyay M/Kismaayo ee Xar unta G/Jubbada Hoose ayaa lagu soo qab qa btay 20 qof,oo qaarkood ay ku jiraan ganacs ato. Ganacsatadan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka ganacsada maandooriyaha, sida xa shiishadda iyo qamriga, oo dhibaato badan ku haya dadka deegaanka.
Hawlgalkan oo laga sameeyay xaafadda Cal anley waxa uu ka dambeeyay, markii dadka de egaanka ka soo cawdeen, sida uu sheegay G/le Warsame Axmed Geelle, Taliyaha Ciidan ka Booliska ee Kismaayo.
Taliyaha oo la hadlay Warbaahinta ayaa she egay in ganacsatada maandooriyaha ay daga al kula jiraan maskaxda bani’aadamka iyo mi dda Magaalada Kismaayo.
"Saakay waxaan ka hawlgalnay kooxda qow leysatada ee qamriga iyo xashiishadda ku ca bta ama keenta M/Kismaayo. Kooxdaas waa koox maskaxda bani’aadamka la dagaalamey sa, oo maskaxda M/Kismaayo la dagaalamey sa, kuwaasaa ka hawlgalnay, oo ka soo qaban ay illaa 20meeyo qof, oo hadda aan gacanta ku hayno.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha ayaa intaa ku daray in dadkaasi ay ku wareejin doonaan hay’adaha garsoorka, si sharciga loo horkeeno, cadaaladana loo waaf ajiyo. "Waxaan u gudbin doonnaa bahda cada aladda, maxkamadaha iyo xeer ilaalinta, had duu Alle idmo, ka bacdina sharciga iyo habka la rabo marin doona.” Ayuu yiri Taliye Geelle.
Nabadoon Cabdi Colow Cumar oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee M/Kismaayo a yaa 2 nooc u kala saaray dhibaatooyinka uu dadka reer Kismaayo ku hayo isticmaalka ma andooriyaha. "Dhibaatooyinka uu nagu hayo muqaadaraadku ama maandooriyaha M/Kism aayo waxaan u kala saarayaa 2nooc, mid qars oodi ah iyo midka muuqda. Midka qarsoodiga waa qamriga iyo xashiiska, midka muuqda wa a midka noogu daran ee ardaydii naga fasah aadiyay, waxaana ka mida taambuuga.” Ayuu yiri Nabadoon Colow.
Ka ganacsiga maandooriyaha ayaa billihii la soo dhaafay ku soo badanayay M/Kismaayo, ti iyoo ay walaac ka muujiyeen dadka deegaan ka, haba ugu badnaadaan waxgaradka iyo waalidiinta.
Duulimaadkii ugu horreeyay oo u kala goo shi doona Israa’iil & Imaaraadka
Markii ugu horreysay taariikhda, waxa saaka lagu wadaa in duulimaad rakaab ah oo ka soo kicitimay Israa’iil uu soo caga dhigto dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, kadib markii 2da dal ay caadi ka dhigeen xiriirka u dhexe eya. Diyaaraddaasi waxa raaci doona wefdi ka socda Israai’iil iyo saraakiil Maraykan ah kuw aasoo gacan ka geystay ga